Đánh giá Top 5 kem chống nắng Kiehl’s bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đánh giá Top 5 kem chống nắng Kiehl’s bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá Top 5 kem chống nắng Kiehl’s bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
U-Kiehl “uyindoda enkulu” enethonya elikhulu emakethe yobuhle. Nakuba kuwumkhiqizo wezimonyo osezingeni eliphezulu, imikhiqizo yaziswa kakhulu, kodwa Isikrini selanga sikaKiehl Ingabe uhlose okulungile kwesikhumba sakho? Ukuze uphendule le nkinga, sicela ubhekisele esihlokweni esingezansi okwamanje!
1 Mayelana ne-Kiehl’s brand cosmetic brand
2 Buyekeza ama-TOP 5 Kiehl’s sunscreens ukusuka ku-A ukuya ku-Z
2.1 1. I-Ultra Light Daily UV Defense ka-Kiehl’s SPF 50 PA++++ Anti-pollution
2.2 2. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defence Aqua Gel Sunscreen
2.3 3. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Tone Up Cream
2.4 4. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense CC Cream Sunscreen
2.5 5. Isikrini selanga sesikhumba esibucayi, isikhumba esinamafutha induna Kiehl sika Mineral Sunscreen
3 Imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo
Mayelana ne-Kiehl’s brand cosmetic brand
Umkhiqizo kaKiehl ekuqaleni wawuyisitolo sezidakamizwa esincane e-East New York. Ngaleso sikhathi, i-Kiehl yayiwukuphela kwesitolo sezidakamizwa “indawo yokuhlala” ekhoneni lika-3rd Street, 13th Street, East New York Village. Kuze kube manje, i-Kiehl’s isiwumkhiqizo ohlotshaniswa nezimonyo ezisezingeni eliphezulu ezithandwa ekhaya naphesheya.
Ibhrendi yezimonyo ephambili ka-Kiehl
Thenga I-GENUINE KIEH’S E-LAZADA
Ngo-2000, i-L’Oreal Group “yazuza” ngokusemthethweni i-Kiehl’s, lokhu kufana nenkundla yokusiza u-Kiehl akhulise inethiwekhi yebhizinisi lakhe. Imikhiqizo ka-Kiehl manje isitholakala kalula futhi ithengwe, kungaba mathupha esitolo esigunyaziwe esisatshalaliswe kakhulu noma ku-inthanethi.
Okwenza uhlobo lukaKiehl luhluke ukuthi yonke imikhiqizo isuselwa emvelweni. Ngakho-ke, izimonyo zikaKiehl ziphephile kakhulu, zilungile, zakha “ubungane” nabathengi. I-Kiehl inikeza imigqa ehlukahlukene yezimonyo, njengezihlanzi ze-chrysanthemum, imaski, amathoni, ama-lotions, njll.
Kodwa okuvelele kakhulu kwalolu phawu kumele kukhulume imigqa ye-sunscreen ye-Kiehl. Nakuba benganikezi imigqa eminingi yokuvikela ilanga njengamanye amabhrendi, umugqa ngamunye unikeza ikhwalithi ye-premium.
Kulesi sihloko, ngizohlola ngokuningiliziwe ama-sunscreens aphezulu angu-5 athengiswa kakhulu enkampani ukuze wonke umuntu abe nombono oqondile futhi akhethe isikhilimu selanga esifanele sesikhumba sakhe.
Buyekeza ama-TOP 5 Kiehl’s sunscreens ukusuka ku-A ukuya ku-Z
1. I-Ultra Light Daily UV Defense ka-Kiehl’s SPF 50 PA++++ Anti-pollution
Lo mugqa wokuvikela ilanga uklanywe ngeshubhu lezinto eziphephile zepulasitiki. Okumhlophe umbala oyinhloko, okugqanyisiwe kuwo umugqa osawolintshi namagama-ncazo athi “SUNCREAM”. Ulayini owolintshi usiza abasebenzisi ukuthi bawuhlukanise kalula kweminye imigqa yokuvikela ilanga ye-Kiehls.
“I-interface” yomkhiqizo ikhombisa umthamo, isikhathi sokukhiqiza nokusetshenziswa kanye nemigqa embalwa yencazelo emfushane yokusetshenziswa. “Lo mngane” ukhiqizwa ngezindlela ezimbili eziyinhloko, i-30ml kanye ne-60ml, okwenza kube lula kubasebenzisi ukukhetha efanele izidingo zabo.
Izithako kanye nokusetshenziswa
I-Ultra Light Daily Defense Anti – Ukungcola kunomphumela wokuvikela isikhumba “kakhulu” emisebeni yelanga. Ikakhulukazi ngokumelene nama-ejenti emvelo afana nothuli, imisebe yelanga, amanzi emvula, …. Ngezithako “zangempela” kusikrini selanga sika-Kiehl lo mugqa uhlanganisa:
I-Peppermint Extract (ekhishwe ku-mint) ikhulisa ukumelana kwesikhumba, iqinisa amasosha omzimba ngokumelene nama-ejenti ayingozi avela emvelweni.
I-Scutellaria Baikalensis Root Extract (ekhishwe empandeni ye-Hoang Cam) inamandla okulwa ne-antioxidant, esiza ukunciphisa umonakalo odalwa ukukhanya kwelanga.
I-Yeast Extract (ekhishwe kumakhowe abilisiwe) iletha amavithamini namaminerali azuzisayo ukusekela “umsebenzi” wokunakekelwa kwesikhumba kanye nezimpawu zokuguga.
I-Tocopherol (umndeni we-Vitamin E) iyinto enemiphumela enamandla ye-antioxidant, enikeza umswakama esikhumbeni, iletha ubusha nokukhanya.
Nakuba umkhiqizo ukhangiswa njengokufanele zonke izinhlobo zesikhumba, ngokokubuyekezwa kwalabo abanesikhumba esibucayi kakhulu, ikhwalithi yomkhiqizo ayilungile ngempela. Ngoba ku-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense, iqukethe utshwala obomile. I-Alcohol Denat) . Lena into enamandla okubangela ukucasuka, ngakho labo abanesikhumba esivamile nesomile bazofaneleka kakhulu.
Linganisa okuhle nokubi
Kulula ukuyiphatha ngenxa yobukhulu bayo obuhlangene
Isikhumba asivinjwanga ngenxa “yokwakheka” okuncane kongqimba lokuvikela ilanga
Ukumelana nokukhukhuleka okujwayelekile
Ukumelana okuphezulu kuma-ejenti emvelo
Isici esiphezulu sokuvikela ilanga esifanele ukusetshenziswa kwansuku zonke
Umkhiqizo uqukethe utshwala
Iphunga linamandla kancane
Ikhono elimaphakathi lokulawula uwoyela
Intengo iphakeme kancane
2. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defence Aqua Gel Sunscreen
Ulayini we-Aqua Gel kaKiehl usasebenzisa okumhlophe nokuluhlaza njengombala oyinhloko ekwakhiweni. Uma uthi nhlá i-Aqua Gel ifana kakhulu ne-Mineral Sunscreen kodwa isenomehluko. Idizayini ye-Aqua iyishubhu elizivelelayo esikhundleni se-sunscreen eyimineral, okuwuhlobo lwe-screw-cap.
Lo mkhiqizo futhi unamandla amaningi okuhlinzeka ngezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi. Njengephakethe le-3ml ongalisebenzisa uma uhamba noma labo bakho ukuzwa umkhiqizo okokuqala ngqa. Compact 30ml tube, elula ukuthwala nsuku zonke futhi ukonga 60ml tube.
Ifomula yejeli yokuvikela ilanga eyingqayizivele ihlangana nobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-UVA/UVB ukuze inikeze isihlungi esiqinile se-UV. Akugcini nje ukuvikela isikhumba ngokumelene nama-ejenti ayingozi emvelo, kodwa futhi “yakha” umgoqo we-pore ukuze “ulwe” nezibonakaliso zokuguga.
I-vitamin E eningi eneziqephu zemvelo ngokuphelele inomphumela wokunikeza umswakama wokupholisa isikhumba lapho uchayeka elangeni. Umkhiqizo unenhlanganisela elula nencane edonsa ngokushesha ngaphandle kokuvala ama-pores. Ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, kusukela esomile kuya esinamafutha kuya esikhumbeni esihlangene
Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokwethula lo mkhiqizo emakethe, umndeni ka-Kiehl wenze izinyathelo eziningi zokuhlola ukuze uqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo. Ulayini we-Aqua Gel uhlolwe ezindaweni ezinomswakama ophezulu kakhulu kanye nokuhlolwa kwesikhumba. Ngakho ungaqiniseka ngekhwalithi yomkhiqizo.
Inikeza umswakama esikhumbeni
Ukuthungwa okukhanyayo, ukumuncwa okusheshayo
Ikhono lokulawula uwoyela aliphezulu
3. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Tone Up Cream
Ulayini we-sunscreen ka-Kiehl udizayinelwe ngeshubhu lepulasitiki, umbala omhlophe olula kodwa ongaconsi phansi. Umehluko ngeminye imigqa ukuthi umugqa omhlophe awucwiliswanga embaleni omkhulu ngoba umugqa wombala uyacwebezela futhi udonsa amehlo.
Emkhiqizweni kukhona ilogo ye-Kiehl kanye nencazelo emfushane yokusetshenziswa komkhiqizo. Futhi okuvelele phakathi nendawo inkulumo ethi “TONE UP CREAM” emugqeni wombala ukusiza abasebenzisi ukuthi bangadideki neminye imikhiqizo.
BONA INTENGO YOKUNIKEZA KU-LAZADA
I-Tone Up Cream ithatha isithako esikhulu sesithelo se-lychee. Ihlanganiswe nobuchwepheshe baseShayina, i-Kiehl’s yenze intuthuko kwezobuchwepheshe bokusebenzisa i-lychee emikhiqizweni yayo. Ngalobu buchwepheshe, umkhiqizo unikeza isikhumba ithoni elinganayo kanye nethoni yesikhumba ephakanyisiwe ebonakalayo.
Ngesikhathi esifanayo nezithako zemvelo ezivela emakhambi ukusiza isikhumba ukulwa nama-oxidizing agents futhi sihlehlise inqubo yokuguga. Ngaphandle komphumela “wokuqinisa” isikhumba, lo mugqa womkhiqizo une-SPF 50+ +++ inokuvikelwa okuphelele emisebeni ye-UVA/UVB.
I-Tone Up Cream ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba ngoba izithako zikhishwa kuzithako zemvelo, eziyingozi, ezingacasuli. Ngakho-ke, uma unesikhumba esibucayi, usengakwazi ukusebenzisa lesi sikhuseli elangeni.
Intengo: 799,000 VND
Ukuvumelana nezimo okuphezulu ngomklamo ohlangene
Thuthukisa ithoni yesikhumba ngisho nombala
Vula izimbotshana, hhayi ukuvaleka
Sekela ukunakekelwa kwesikhumba “umsebenzi”
Ifanele izinhlobo ezahlukene zesikhumba
Intengo ithe ukukhuphuka
4. I-Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense CC Cream Sunscreen
ukufanaNjengontanga ababili abangenhla, umugqa we-CC Cream nawo uqukethwe kumashubhu epulasitiki ekhwalithi ephezulu. Thatha okumhlophe njengombala oyinhloko ngomugqa ophinki ovelele ukuze wenze umehluko. Emgqeni ophinki ocwebezelayo kunamagama athi “CC CREAM” aphrintwe phakathi nendawo.
Ungathenga usayizi we-30ml Ihlangene ngokuhamba noma sebenzisa u-60ml ukuze wonge okwengeziwe. Indlu ka-Kiehl iphinde ikhiqize ishubhu engu-6ml okuyi-mini yakho ukuze uhlole ukufaneleka komkhiqizo ngokusetshenziswa kokuqala.
BONA INTENGO YOKUNIKEZA KU-SHOPEE
Umkhiqizo awunazo izithako ezibangela ukucasuka kwesikhumba nge-lychee njengesithako esiyinhloko. Ehlanganiswe ne-lychee amakhambi ahlinzeka ngokuvikela “i-premium” esikhumbeni. Umehluko phakathi kwe-CC Cream ne-Tone up Cream yikhono lokumboza ukungapheleli.
Ngakho amantombazane angasebenzisa i-CC CREAM njengesisekelo, esikhundleni sokufihla. Lo mugqa ufanelekile kakhulu kumantombazane amatasa angenaso isikhathi esiningi sokufaka izimonyo ngaphambi kokuphuma endlini.
Ngaphandle kwalokho, inkomba ye-SPF 50 PA ++++ inikeza isivikelo esiqinile se-UV esikhumbeni. Inzuzo ephawulekayo yalo mugqa womkhiqizo ukuthi awukhethi nganoma yiluphi uhlobo lwesikhumba ngoba izithako zingokwemvelo ngokuphelele. Kusukela esikhumbeni esihlangene, isikhumba esomile, isikhumba esinamafutha,… noma ngisho nesikhumba esibucayi.
Intengo: 820,000 VND
Ukuvumelana nezimo okuphezulu
Ukumboza okuphezulu, ukufihla okusebenzayo
Ayibangeli ukucasuka kwesikhumba
Engacasuli esikhumbeni esibucayi
Intengo ibiza kancane
Ikhono lokulawula uwoyela alilungile
5. Isikrini selanga sesikhumba esibucayi, isikhumba esinamafutha induna Kiehl sika Mineral Sunscreen
I-Kiehl’s Mineral Sunscreen sunscreen inedizayini ehluke kancane uma iqhathaniswa neminye imigqa yaso yomkhiqizo. Isixazululo siqukethwe ebhodleleni lepulasitiki elide futhi linekepisi lesikulufu esikhundleni se-pop. Nokho, umbala omhlophe usewumbala ovelele onomugqa oluhlaza okwesibhakabhaka ovelele.
Ingaphambili lomkhiqizo lihlanganisa: amagama athi “UV Mineral Defense” abekwe phakathi nendawo ukusiza abasebenzisi ukuhlukanisa kalula imigqa kanye nolwazi olufushane mayelana nokusetshenziswa komkhiqizo. Umthamo webhodlela, usuku lokukhiqiza, isikhathi sokuphelelwa yisikhathi, njll. nakho kuyaboniswa ngokuvula umkhiqizo.
I-Mineral Sunscreen line yenzelwe isikhumba esibucayi, izinduna ezinamafutha ngakho izithako ziqinisekisiwe ukuthi azibangeli ukucasuka. Ikakhulukazi izithako ezilandelayo:
I-Titanium Dioxide idala ifilimu yokuvikela ilanga eyimineral engu-100% ukusiza isikhumba simelane nemisebe ye-ultraviolet ngaphandle kwemiphumela emibi.
I-Tocopheral (umndeni we-Vitamin E) inikeza umswakama esikhumbeni, okusiza ukunciphisa ukoma okubangelwa ukushisa okuphezulu okuvela elangeni.
I-Rosa Gallica (Ingcaphuno ku-French rose) iletha ubumnene nokupholile esikhumbeni
Intengo: 980,000 VND
Kulula ukuyihambisa ngenxa yokwakheka kwayo okuhlangene
Izithako zemvelo eziphephile
Akukho ukucasuka kwesikhumba noma imiphumela emibi
Ayisenzi isikhumba sibe namafutha noma sinamathele
Iphunga linamandla kancane ngenxa yamakhambi
Ibala lesikhumba liyehliswa ngoba ukhilimu umnyama kancane
Inkomba: Izikhilimu zelanga ezingu-9 ezihamba phambili zesikhumba esibucayi okufanele uzithenge manje
Ungasithenga kuphi isikrini selanga sika-Kiehl?
Njengamanje, akunzima kuwe ukuthi “uthenge” imikhiqizo ka-Kiehl ngoba “ikhava” isakazeka kakhulu. Ungathenga isikrini selanga sika-Kiehl ezitolo zangempela ze-Kiehl noma kuma-showrooms eVietnam.
Noma ungathenga ku-inthanethi kumasayithi e-e-commerce afana no-Shopee, i-Lazada, i-Sendo, njll. Lawa masayithi ngokuvamile anezinyuso eziningi ezikhangayo zabasebenzisi, ngakho-ke ungaya lapha ukuze ujabulele izintengo ezikhethwayo.
Imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo
Kulula ukuyisebenzisa njenganoma yisiphi esinye isikrini selanga. Ikakhulukazi ngenqubo yezinyathelo ezi-4 ezilandelayo:
Isinyathelo 1: Nakekela isikhumba sakho ngemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ekuseni
Isinyathelo sesi-2: Faka inani elifanele likakhilimu esandleni bese uchaza amaphuzu angu-5 ebusweni (ebunzini, ekhaleni, ezihlathini nasesilevuni).
Isinyathelo sesi-3: Sakaza ukhilimu ngokulinganayo bese ubamba kancane ukuze ukhilimu ungene esikhumbeni
Isinyathelo sesi-4: Qhubeka nokwenza “umsebenzi” wezimonyo (uma kunesidingo)
Sebenzisa i-sunscreen efanele ukuze umkhiqizo usebenze kahle kakhulu
Izinto okufanele uzikhumbule lapho usebenzisa:
Sebenzisa nsuku zonke noma ngabe udinga ukuphuma noma cha
Gcoba ukhilimu okungenani imizuzu engu-20 ngaphambi kokuba uphumele ngaphandle.
Phinda ugcobe ukhilimu ngemva kwamahora angu-2 ukuya kwangu-3 uma wenza imisebenzi yangaphandle ngokuqhubekayo
Susa izimonyo ngemva kokufaka i-sunscreen
Khumbula ukufaka i-sunscreen entanyeni yakho futhi.
Ngenhla yi-TOP 5 yokuvikela ilanga ethengiswa kakhulu ka-Kiehl muva nje. Ngethemba ukuthi ngalesi sihloko, uyitholile impendulo yakho.
Xem Thêm Đánh giá top 3 sữa tăng cân Vinamilk cho người lớn bán chạy nhất | Muasalebang
Top khách sạn Sa Pa cho bạn trải nghiệm chill nhất | Muasalebang
Balo Laptop Acer Gaming Suv chính hãng giá tốt | Muasalebang
Top 10 Nước Ngâm Lens tốt nhất hiện nay (Rohto, Renu, Seed) | Muasalebang